IiNkqubo eziMangalisayo zaBayili | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukusuka apha siye sakhankanya kule minyaka idlulileyo kwizinto ezinqabileyo esizibonelelwa yipanorama esele iququzelele umsebenzi wethu kwaye inceda ekufumaneni iziphumo ezingaphezulu nangakumbi. ootitshala. Nangona kunjalo, sifikelele kwinqanaba apho amandla ethu athe acinywa ngandlel 'ithile zizixhobo zethekhnoloji ngokwayo. Ngoku kukho usetyenziso oluye lwacocwa ngakumbi ukubonelela abasebenzisi babo ngezixhobo abazifunayo. Ukusuka kwiilogo (esingazibandakanyanga apha ngendlela, kuba kubonakala ngathi kukhuphiswano olungalunganga kumyili, ngokunyaniseka) ukuya kwiikhathuni, imodeli ye3D okanye imibala yemibala.
Ngaba singathetha ngohlobo lokungenelela kwetekhnoloji? Ngaba usetyenziso luya kwenza ukuba umyili anyamalale? Andicingi njalo, kodwa kukho amaxesha apho ndithandabuze khona, ngakumbi xa ndicinga ukuba ezi zicelo ziya zisanda ngakumbi kwaye zixhotyisiwe. Ngaba iteknoloji iya kujikela kumyili wemizobo? Ndicinga ukuba le yingxoxo-mpikiswano endifuna ukuxoxa ngayo kwelinye inqaku, okwangoku namhlanje ndikushiya nemizekelo ecacileyo yento endiyithethayo. Izicelo kwiminyaka emihlanu edlulileyo esasingenakucinga ukuba ziya kubakho kwaye namhlanje sizisebenzisa mihla le.
I-Adobe Capture: Sele sithethile ngayo ngamanye amaxesha kwaye kukuba ngayo kuya kufuneka uzinikezele ekuthatheni iifoto ngesixhobo sakho esiphathwayo kwaye iya kuthi ngokuzenzekelayo iphuhlise iphalethi yombala ngaphandle komzekelo wesampulu osandula ukuwuthatha. Ukongeza, unokwenza iibrashi zakho kwaye ujonge ukuzihlanganisa ngokulula kuyilo lwakho. Ngaba ayisiyonto imnandi?
Umfanekiso: Ukusebenza kwayo kulula kakhulu. Kuya kufuneka ukhuphele iplagi kwaye uyifake kwi-Photoshop. Nje ukuba ubandakanyeke kwisicelo, sinokuzikhuphelela imifanekiso ngaphandle kwazo naziphi na iziphazamiso ezikhangelwa kukukhangela kunye nokukhuphela. NgePictura sinokufumana ngokukhawuleza kwaye sisebenzise nawuphi na umfanekiso ovela kwiFlickr. Emva kokwenza uphando lwethu kunye nokufumana umfanekiso obewukhangele, iya kuba ngumcimbi wokucofa kunye nokuqala ukusebenza.
3-Shayela: Yinkqubo eyenziwe ngabaphandi uTao Chen, Zhe Zhu, Ariel Shamir, Shi-Min Hu noDaniel Cohen-Okanye, abasuka kwiYunivesithi yaseTel-Aviv kwa-Israyeli nakwiYunivesithi yaseTsinghua eBeijing. Le software iya kuvumela umsebenzisi ukuba akhuphe iimodeli ze-3D kwimifanekiso ye-2D. Kule nto kuya kufuneka ulandele ngokulula umendo wento nganye kumfanekiso ngokwawo, ngokunqamla imiphetho yento efotweni, inkqubo iyiguqula ngokuzenzekelayo ibe yimodeli ye-3D enokujikeleza, iphindwe kabini kwaye iguqulwe njengoko unqwenela . Nantsi isampula yeprojekthi, engekapapashwa nangona sele ineminyaka isenzeka ividiyo yayo. https://www.youtube.com/watch?v=Oie1ZXWceqM Kukho enye enye into efana nayo ekhoyo kubasebenzisi kwaye ibizwa ngokuba yiSmoothie 3d. Nanku umzekelo: https://www.youtube.com/watch?v=fbEHGUnpMxI#t=32
Isixhobo sepeyinti SAI: Esi sicelo saseJapan sinokutsha okuncinci, nangona kunjalo kufanelekile ukuba sibe kukhetho lwethu lwamandla agqithisileyo xa kuthelekiswa nokukhanya kwawo. Ubunzima bayo phantse abucaci ukuba bunokusetyenziswa kuyo nayiphi na ikhompyuter. Ijolise kubabonisi kwaye iya kusinika ukugqwesa okungathethekiyo kobuchwephesha obufana nobo busetyenziswe ngumzobi uJosh Galvez esele sithethe ngaye ngamanye amaxesha. Ngaphandle kwamathandabuzo, kuyacetyiswa!
Imibala: Iziphumo zokuqaqamba kombala zihlala yenye yezona zixhobo zibalaseleyo zokucacisa kuluhlu lwezinye iindlela ezikhoyo kumyili wanamhlanje. Ukusuka kwesi sicelo sinokusebenzisa ikhamera yefowuni ephathekayo kwaye iya kusombulula umfanekiso wethu ukukhupha ezinye iindawo zombala kwaye sifumane iziphumo ezimangalisayo ze-100%. Iziphumo ziingcali, ngokugqitywa okucocekileyo kunye nokugqwesa konke, siyifumana ngexesha lokurekhoda. Ukongeza kwimpembelelo ye-colorplash, inezinye iziphumo kunye nokukhetha okuya kuthi kunike ukwakheka kweefoto ngamandla amakhulu kunye nobutyebi.
Umdibanisi woMyili: Ibe sesinye sezona zinto zifunyanisiweyo kunyaka ophelileyo. Yenzelwe iMac kwaye nangona inolukhuphiswano olunzima olukhoyo namhlanje kwicandelo lethu, indlu yeAdobe, kancinci kancinci ibisifumana ukuzithemba kwabaqulunqi. Kwaye ayisiyiyo nayiphi na inkqubo yokuzoba vetri. Sijongene nesicelo esinamandla kakhulu esibonelela ngezixhobo ezihambele phambili kwaye nangona zingafani nezi zicetywayo ngu-Illustrator ngokobungakanani, inendawo elungileyo ekufuneka ithathelwe ingqalelo: Ukukwazi kwayo ukwenza ulwazi kunye nokusebenza ngezixa ezikhulu yedatha. Siya kuba nakho ukufumana iziphumo zobungcali ngendlela engummangaliso kwaye ngexesha elincinci kakhulu kunokuba besifanele ukutyala imali kwiAdobe Illustrator.
Ulwabiwo: Ukuba umbala obonakalisa isiphumo yenye yezona zinto zifunwayo kwicandelo loyilo lwentengiso, isiphumo sokuvezwa okuphindwe kabini yeyona nto idume kakhulu kwindalo emanyelwayo kwaye sele ikhe yasetyenziswa kwizihloko eziphambili zamabali abaliweyo aziintsomi nakwamanye amazwe. Indawo yobugcisa bevidiyo obuchaphazela ikhosi kuyilo lwegraphic kunye nokufota. Ngale sicelo, esifumaneka kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS, siya kufumana ezona ziphumo zibalaseleyo. Ukusebenza kwayo kulula kakhulu kwaye kuyakwanela ukulayisha iifoto ezimbini ezivela kwilayibrari yethu kwaye siqhubeke nokudibanisa zombini sisebenzisa izibonisi zokukhanyisa. Ngesoftware sinokumisela okanye silawule inqanaba lokudibanisa phakathi kweefoto ezimbini, ezisinika amandla amakhulu xa sisebenza.
I-Momentcam: Ngokwesiko, iikhathuni yayingumsebenzi weekhathuni, kodwa kancinci uyilo lwesoftware kunye nokusetyenziswa kugqityiwe ukulingisa ubugcisa be-caricature njengesixhobo esicacisayo. Siyazi ukuba kunokwenzeka ukuba uphuhlise ezethu iikhathuni ezivela kwizicelo ezinje ngeAdobe Photoshop, kodwa zifuna ulwazi oluthile kunye notyalo-mali oluninzi lwexesha, ngakumbi ukuba siqala kwifoto kwaye sifuna ukufumana esona siphumo. Esi sicelo see-smartphones sikuvumela ukuba wenze iikhathuni ezivela kwimifanekiso nangexesha lokurekhoda. Imifanekiso eqingqiweyo evela kwiifoto https://www.youtube.com/watch?v=A9eqn-sKR-w
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Ii -apps eziyi-8 zabaqulunqi ongakhange ucinge ukuba zikhona
UJavier Lukarelly sitsho
Mholo . Ndiyabulela kakhulu ngokwabelana.
Phendula kuJavier Lukarelly
I-126 yemithi eyahlukeneyo evela kwihlabathi liphela kuthotho 'Ubomi obufihlakeleyo bemithi'